Serivisy sary Ho amidy sy manofa amin'ny Realtyww Info
Serivisy sary in Florida
Serivisy sary in New York City
Serivisy sary in New York
View Serivisy sary Published 11 months ago
Navoakan'i jenny davis
View Serivisy sary Published 2 years ago
Ny sary dia ny siansa, ny art, ny fampiharana ary ny fanaovan-javatra mamorona sary maharitra amin'ny alàlan'ny fandraisam-peo na hazavana elektromagnetika hafa, na elektronika amin'ny alàlan'ny sensor sensor, na simika amin'ny alàlan'ny fitaovana saro-pady toy ny sary mihetsika.  Matetika ny lensa dia ampiasaina mba hampifantohana ny hazavana taratra na avoaka avy amin'ny zavatra ho sary tena izy eo amin'ny velaran'ny hazavana mora apetraka ao anaty fakantsary mandritra ny fipoahana efa-potoana. Amin'ny alàlan'ny sensor sensor sary elektronika, dia miteraka fametrahana herinaratra isaky ny piksel, izay arakaraka amin'ny fomba elektronika ary tehirizina ao anaty rakitra sary nomerika ho fampisehoana na fanodinana manaraka. Ny valin'ny fandroahana sary dia sary tsy hita maso, izay "novokarina" simika taty aoriana ho sary hita maso, na ratsy izany na tsara raha miankina amin'ny tanjon'ny sary misy sary sy ny fomba fanodinana. Ny sary ratsy amin'ny sarimihetsika dia ampiasaina amin'ny fakana sary mba hamoronana sary tsara eo amin'ny fototry ny taratasy, fantatra amin'ny maha pirinty, na amin'ny alàlan'ny fampiasana haingam-pandeha na amin'ny fanontana fifandraisana. Ny sary dia apetraka amin'ny sehatry ny siansa, famokarana (ohatra, fotolitographiana), ary orinasa, ary koa ny fampiasa mivantana amin'ny art, film ary famokarana horonan-tsary, tanjona fialamboly, fialamboly ary serasera.